Vaovao - Ahoana no hamitana ny fandrosoana makiazy
Ahoana ny fomba famitana ny fandrosoana makiazy
Raha amin'ny resaka makiazy dia ny fanaintainana ny tavanao no tokony ho filaharanao voalohany alohan'ny hifindranao amin'ny makia molotrao sy ny makiazy amin'ny masonao. Saingy mety hanjary sarotra ny raharaha. Tena mila primer ve ianao? Misy miafina ve aloha na aorian'ny fototra? Tonga eto izahay haka ny tombantombana amin'ny fampitahana miaraka amin'ny torolàlana isan-tsokajiny amin'ny fampiharana makiazy tarehy hatrany am-piandohana ka hatramin'ny farany.
Ny fampiasana primer dia iray amin'ireo zavatra tsara indrindra azonao atao raha ny momba ny fanaovana makiazy. Primer dia afaka manampy ny makiazyo hitafy milina tsara mandritra ny tontolo andro. Misafidiana primer miaraka amina famaranana mamirapiratra raha manana hoditra maina ianao na primer miaraka amina matte raha manana hoditra menaka ianao. Na inona na inona primer hovidinao, dia apetaho amin'ny tavanao na amin'ny faritra kendrena, arakaraka ny ahiahy manokana momba ny hoditrao.
STEP 2: SORATRA NY COLORCT CONCEALER
Manana faribolana mainty ao ambanin'ny maso na mena izay tianao afenina? Fotoana izao hampiasana loko fanitsiana loko hanafenana ireo. Afangaroy fotsiny ny fanafenana loko kely fanitsiana loko amin'ny faritra kendrena amin'ny alàlan'ny rantsan-tànanao.
STEP 3: FOTOTRA
Tsy ho feno ny endrikao raha tsy misy fototra kely! Misy karazana fototra maro samihafa any, koa mifidiana iray mifanaraka amin'ny ilainao. Ohatra, raha manana hoditra menaka ianao dia mety te hieritreritra ny hampiasa fototra farany matte (aka tsy mamirapiratra). Etsy ankilany, raha manana hoditra maina ianao, fototra vita mamirapiratra, dia mety ho safidy tsara kokoa ho anao izany.
STEP 4: BRONZER, BLUSH, AND / OR HIGHLIGHTTER
Manaraka: Araho ny famirapiratanao, na alio feo mena ianao amin'ny alàlan'ny fametahana alim-baravarana kely, loko mena ary fanasongadinana. Mandra-pahatongan'ny alimo sy ny mpandoko volo dia apetraho amin'ny faritra izay hamelezan'ny masoandro ny tavanao (ny handrinao, ny oronao, ny takolanao ary ny saokanao).